तपाईंको ब्लग पोष्टहरू पढ्न सहस्राब्दी कसरी बनाउने - Victor Mochere
by कियारा मिलर
तपाईंको ब्लग पोष्टहरू पढ्न सहस्राब्दीहरू कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? हजारौं पाठकहरूको लागि ब्लगिङ कठिन हुन सक्छ। तर उचित प्रविधिहरूको साथ, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो ब्लग लेखहरू पढ्न पाउनुहुनेछ। सहस्राब्दीहरू विश्वभरि पुस्ताको आधारमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या हो। यसले सहस्राब्दी ब्लग पाठकहरूलाई तपाईंको ब्लग पोष्टहरूमा थप आँखाहरू प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनाउँछ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर, तिनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो क्यारियरमा बसोबास गरेका छन् र उपभोक्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो समूह गठन गरेका छन्।
धेरै सहस्राब्दीहरूले आफ्नो समय अनलाइन ब्लगहरू पढ्न र अन्य इन्टरनेट गतिविधिहरूमा संलग्न हुन खर्च गर्छन्। त्यसोभए, यदि तपाइँ व्यवसाय ब्लगिङमा सफल हुन चाहानुहुन्छ भने, सहस्राब्दीहरू तपाइँको ध्यानको केन्द्र बिन्दु हुनुपर्दछ। तर किनभने त्यहाँ धेरै ब्लगहरू अनलाइन छन्, यो प्रतिस्पर्धालाई बाहिर निकाल्न र सहस्राब्दीहरूको ध्यान खिच्न चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि, हामी तपाईंलाई यस लेखमा तपाईंको ब्लग पोष्टहरू पढ्नको लागि सहस्राब्दीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने केही कार्ययोग्य तरिकाहरू छलफल गर्नेछौं।
सायद तपाईंको ब्लग हजारौं पाठकहरूको ध्यान कमाउन संघर्ष गरिरहेको छ। मुद्दा तपाईंले कल्पना गरे जस्तो नहुन सक्छ किनभने यसले धेरै कारकहरू समावेश गर्दछ, जस्तै सहस्राब्दी व्यवहार, कार्यान्वयन, पदोन्नति, र वितरण। त्यसोभए, तपाईंले सहस्राब्दी पाठकहरूलाई उनीहरूको पठन आवश्यकताहरू कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर जान्न आवश्यक छ। त्यसकारण, तपाइँको ब्लगिङ व्यवसाय लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस् र तपाइँले प्रकाशित गर्ने ब्लग पोष्टहरूले उनीहरूलाई कसरी फाइदा पुर्याउनेछ भनेर सोच्नुहोस्।
1. सहस्राब्दीहरू तपाईंको सामग्री पढ्नको लागि व्यावहारिक समाधानहरू प्रकाशित गर्नुहोस्
2. सहस्राब्दीहरूका लागि तपाईंको ब्लग लेखहरू पढ्न सजिलो बनाउनुहोस्
3. तिनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सहस्राब्दीका वास्तविक जीवनका उदाहरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्
४. आफ्ना ब्लगहरूलाई पढ्नको लागि भावनाहरू भर्नुहोस्
5. सहस्राब्दीहरूलाई लोभ्याउन सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो ब्लगहरू प्रवर्द्धन गर्नुहोस्
6. तपाईंका पोस्टहरूलाई विभिन्न कोटीहरूमा विभाजन गर्नुहोस्
7. तपाईंको ब्लग पोस्टहरू पढ्न सहस्राब्दी प्राप्त गर्न हास्य इम्बेड गर्नुहोस्
8. भिडियो, इन्फोग्राफिक्स, र अन्य मनमोहक छविहरू प्रयोग गर्नुहोस्
9. सहस्राब्दी पाठकहरूलाई आकर्षित गर्न लगातार पोस्टिङ तालिका पछ्याउनुहोस्
10. सामाजिक मुद्दाहरूमा फोकस गर्नुहोस् ताकि उनीहरूलाई तपाइँका पोस्टहरू पढ्नुहोस्
11. प्रयोग गर्न सजिलो टिप्पणी खण्ड सेट अप गर्नुहोस्
के तपाईं आफ्नो ब्लग पोष्टहरू पढेर सहस्राब्दी प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ?
सहस्राब्दीहरू व्यस्त पुस्ता हुन्; उनीहरु मात्रै होइन, आजकल सबै व्यस्त छन् । हामीले पूरा गर्न धेरै छ, तर समय दुर्लभ छ। यसरी हेर्दा, मानिसहरू आफ्ना समस्याहरूको तत्काल समाधान चाहन्छन् र तिनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने व्यावहारिक सल्लाह चाहन्छन्। त्यसले भन्यो, यदि तपाइँ ब्लग पोष्ट लेखन मार्फत सहस्राब्दीहरूको ध्यान खिच्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँले व्यावहारिक समाधानहरू प्रकाशित गर्नुपर्छ।
तपाईंले कुन डोमेन वा उत्पादन वा सेवाहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। तपाईंको ब्लगहरूमा यथार्थवादी हुनुहोस्। तपाईको ब्लगको शीर्षक पढेर मात्र पाठकहरूलाई उनीहरूले लेखबाट व्यावहारिक सल्लाह पाउनेछन् भनेर विश्वस्त पार्न सक्छ। यदि तपाईंले यो एउटा ब्लगिङ रणनीति लागू गर्नुभयो भने, तपाईंले सहस्राब्दी पाठकहरूलाई आकर्षित गर्ने र तपाईंको ब्लगलाई छिटो बढाउने सम्भावनाहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नुहुनेछ।
एक महत्त्वपूर्ण ब्लगिङ पक्ष जुन ब्लगरहरूले कम प्रयोग गर्छन् पाठकहरूलाई तपाइँको सामग्री उपभोग गर्न कत्तिको सजिलो हुनेछ भनेर विचार गर्दैन। त्यसैले आफैलाई सोध्नुहोस्:
के पाठकहरूलाई तपाईंको ब्लगहरू पढ्न गाह्रो हुनेछ?
के तपाइँको लक्षित पाठक तपाइँको सामग्री मार्फत स्क्यान गर्न सक्षम हुनेछ?
के पूरै पोस्ट पढ्न नचाहनेहरूले पृष्ठको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा हाम फाल्न र उनीहरूलाई उत्साहित पार्ने कुराहरू पढ्न सक्छन्?
सहस्राब्दी ब्लग पाठकहरूले उनीहरूले ब्लग लेखहरू पढ्ने तरिकामा महत्त्वपूर्ण विकास गरेका छन्। सम्पूर्ण पृष्ठ पढ्नुको सट्टा, ब्लग दर्शकहरूको यो समूहले तिनीहरूको लागि अर्थपूर्ण विवरणहरू फेला पार्न पृष्ठ स्क्यान गर्न मन पराउँछ। फलस्वरूप, तपाईंको सामग्री स्क्यानयोग्य बनाउनुले सहस्राब्दीहरूलाई तपाईंको ब्लग सामग्री पढ्न सजिलो बनाउँदछ। तदनुसार, तपाईंको लेखहरू संरचना गर्नुहोस् ताकि मुख्य विवरणहरू छिट्टै पहिचान होस्। पाठकहरूलाई उनीहरूले के पढ्न चाहन्छन् भनेर मार्गदर्शन गर्न स्क्यानयोग्यता तत्वहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ सहस्राब्दी बनाउन चाहानुहुन्छ तपाइँको ब्लगहरू सुरु देखि अन्त्य सम्म पढ्नुहोस्, त्यहाँ एउटा कुरा हो जुन तपाइँले कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुँदैन। आफ्नो सामग्री विस्तार गर्न सहस्राब्दीको जीवनबाट वास्तविक जीवन उदाहरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो किन महत्त्वपूर्ण छ? तपाईको सामग्रीसँग जडान हुन नसक्नु भनेको तपाईको ब्लग पोष्टहरू कसैले नपढ्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो। तर जब तपाइँ वास्तविक व्यक्तिहरू (सहस्राब्दी) बाट अनुभव र उदाहरणहरू साझा गर्नुहुन्छ, तपाइँ उनीहरूसँग जडान गर्नुहुन्छ।
तपाईंले यो उमेर समूहलाई बुझाउनुहुन्छ कि तपाईंले सामग्री डिजाइन गर्नुभएको हो विशेष गरी तिनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न। यसबाहेक, जब पाठकहरूले उनीहरूले पढिरहेका ब्लग पोष्टहरूमा उल्लेखित आफ्नो जीवनका अनुभवहरूबाट उदाहरणहरू फेला पार्छन्, तिनीहरू थप व्यस्त हुन्छन्। त्यसोभए, तपाईंको ब्लग पोष्टहरूलाई बलियो बनाउन सहस्राब्दीहरूको जीवनबाट धेरै वास्तविक जीवन उदाहरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको सहस्राब्दी साथीहरु र पाठकहरु लाई तपाइँको ब्लग सामग्री संग प्रतिध्वनित गर्ने दैनिक जीवन को ढाँचा जान्न को लागी परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
Millennials एक भावनात्मक पुस्ता हो। त्यसोभए, यो राम्रो हुनेछ यदि तपाईंले उनीहरूका भावनाहरू जगाउनुभयो भने उनीहरूलाई तपाईंको ब्लगहरू पढ्न लगाउनुहोस्। कसरी? तपाईंको ब्लग पोस्टहरूमा भावनाहरू र उत्साहहरू भरेर। यसलाई ध्यानमा राख्दै, सहस्राब्दी पाठकहरूको मन मोहित गर्न, तपाइँ सामग्री लेखनमा सँगी भावनाहरू थप्न दक्ष हुनुपर्दछ। र त्यसपछि सहस्राब्दी पाठकहरूको लागि लेखहरू विकास गर्दा यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
सबैजना भावुक हुन्छन्, तर सहस्राब्दीहरू स्वभावले बढी भावुक हुन्छन्। अनुसन्धानले बताउँछ कि पुरुष सहस्राब्दीहरूले यसलाई ब्याकअप गर्न शारीरिक बल भन्दा भावनाहरूलाई बढी महत्त्व दिन्छ। कल्पना गर्नुहोस् कि यदि पुरुष सहस्राब्दीहरू बढी मायालु छन् भने महिला सहस्राब्दीहरू कत्तिको भावुक हुनेछन्। आखिर, महिलाहरू सामान्यतया पुरुषहरू भन्दा बढी भावुक हुन्छन्।
यसैले, यदि तपाईंको ब्लग पोष्टहरूमा भावनात्मक अपील छ भने, सहस्राब्दी ब्लग पाठकहरू स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूतर्फ झुकाव हुनेछन्। तसर्थ, भावनाहरु संग आफ्नो ब्लग infuse प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो ब्लगहरूमा कस्तो भावनाहरू मिसाउनुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन; उदासी, क्रोध, खुशी, जे पनि हजारौं संग जोड्न सक्छ। कहिलेकाहीँ, हजारौं पाठकहरू यति भावुक हुन्छन् कि उनीहरूले आफ्ना ब्लगहरू साथीहरूसँग सोशल मिडियामा साझा गर्छन्।
सहस्राब्दीको ९०% भन्दा बढीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। तसर्थ, तपाईंको ब्लग सामग्रीको साथ सहस्राब्दीहरूमा पुग्न, तपाईंले सक्रिय रूपमा सोशल मिडियामा आफ्नो सामग्री प्रचार गर्नुपर्छ। सहस्राब्दी पुस्ताले दैनिक धेरै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्दछ, जसले सामाजिक सञ्जाल हो जहाँ तपाइँ सहस्राब्दीहरूको बहुमत पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो दिईएको छ, यो सामाजिक मिडियामा तपाइँको ब्लग प्रचार गर्न को लागी समझदार छ।
यसो गर्नाले, तपाईं आफ्नो व्यापार ब्लगको बारेमा अझै थाहा नभएकाहरूसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। तर, सहस्राब्दीहरू बनाउनको लागि तपाइँको ब्लगहरूमा जानुहोस् र तिनीहरूलाई पढ्नुहोस्, तपाइँले सुनिश्चित गर्नु पर्ने केहि साधारण चीजहरू छन्। तपाईंले सोशल मिडियामा पोस्ट गर्नुभएको विषय चासोको हुनुपर्छ, र तपाईंको ब्लग वा वेबसाइट तिनीहरूलाई अपील गर्नुपर्दछ।
अर्डरले मनलाई आकर्षित गर्छ जबकि विकार होइन। जब तपाईले केहि व्यवस्थित देख्नुहुन्छ, तपाईको दिमाग शान्त हुन्छ किनकि तपाईले देख्नु भएकोमा कुनै अराजकता छैन। ठीक उल्टो, जब तपाइँ केहि अव्यवस्थित देख्नुहुन्छ, त्यहाँ अराजकता छ। फलस्वरूप, तपाइँको दिमाग चंचल महसुस गर्न थाल्छ, र तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्न आग्रह महसुस गर्नुहुन्छ।
यस बुझाइको प्रकाशमा, तपाईंको ब्लग पढ्ने सहस्राब्दीहरूमा पुग्ने एउटा तरिका तपाईंको ब्लगमा अर्डर स्थापना गर्नु हो। कुञ्जी भनेको तपाइँको ब्लग पोष्टहरूलाई विषयहरू अनुसार बिभिन्न कोटीहरूमा विभाजन गर्नु हो। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सम्बन्धी पोस्टहरूमा एक विशेष खण्ड हुनुपर्छ। व्यापार वा उत्पादकता बारे पोस्टहरू क्रमशः, र जस्तै तिनीहरूको उपयुक्त खण्डहरूमा हुनुपर्छ। यो ब्लग रणनीति काम गर्दछ।
के तपाईंलाई थाहा छ कि सहस्राब्दीहरू सबैभन्दा तनावग्रस्त पुस्ता हुन्? अनुसन्धानले देखाएको छ कि 1 देखि 10 को स्केलमा, सहस्राब्दीहरूमा 5.7 को तनाव स्कोर हुन्छ, अन्य पुस्ताहरू भन्दा बढी। धेरै सहस्राब्दीहरूले तिनीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सक्ने चीजहरू मन पराउँछन्। त्यसोभए, तिनीहरूलाई हँसाउनुहोस् र उनीहरूको तनाव स्तर कम गर्नुहोस्। तर कसरी? सम्भव भएसम्म तपाईंको ब्लगहरूमा हास्य सम्मिलित गर्नुहोस्। निस्सन्देह, तपाइँ सधैं हास्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तर जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ प्रयोग गर्नुहोस्। यस ब्लगिङ ह्याकले सहस्राब्दीहरूलाई तपाईंको ब्लगको मायामा झर्ने र पुनरावर्ती आगन्तुकहरू बनाउँदछ।
दृश्यहरू आकर्षक छन्, र सबैले तिनीहरूलाई माया गर्छन्। तपाईंले आफ्नो ब्लग पोस्टहरूमा जति धेरै भिडियोहरू, फोटोहरू, र इन्फोग्राफिक्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, सहस्राब्दीहरू तपाईंको ब्लगहरू पढ्न आउने सम्भावनाहरू त्यति नै बढी हुन्छन्। यसबाहेक, भिजुअल सामग्रीका सबै रूपहरूमध्ये, भिडियोहरूले सबै व्यक्तिहरूको हृदयमा एक विशेष स्नेहको आनन्द लिन्छ। टिकटक र इन्स्टाग्राम रीलहरूको लोकप्रियता भिडियो सामग्रीको प्राथमिकतालाई हाइलाइट गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो।
Millennials नयाँ ब्रान्ड र उत्पादन वा सेवाहरू बारे सिक्ने सहित जानकारी फेला पार्न भिडियो सामग्री हेर्न रुचाउँछन्। सहस्राब्दीका ६०% र ५०% भन्दा बढीले क्रमशः एक मिनेट र २-५ मिनेट भिडियोहरू हेर्न मन पराउँछन्, जबकि बाँकीले दैनिक ६-१० मिनेट भिडियोहरू हेर्छन्। त्यो दिईएको छ, जहाँ लागू हुन्छ तपाईको ब्लग लेखहरूमा छोटो भिडियोहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको भिडियोहरू सिर्जना गर्न उत्तम हुँदा, तपाईं मालिकलाई क्रेडिटको साथ YouTube बाट भिडियोहरू इम्बेड गर्न सक्नुहुन्छ। आज, त्यहाँ धेरै भिडियो सम्पादन वेबसाइटहरू छन् जुन तपाइँ उत्कृष्ट भिडियोहरू उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाइँको दर्शकहरूमा स्थायी प्रभाव सिर्जना गर्दछ। यदि तपाइँ भिडियोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भने, मनमोहक छविहरू, इन्फोग्राफिक्स, र मेमहरू खोज्नुहोस्। यी भिजुअल सामग्रीहरूले तपाईंको ब्लगहरूलाई आकर्षक बनाउन र थप पाठकहरू ल्याउन दिनुहोस्।
उहाँका शब्दहरू रोमान्टिक प्रेम र सबै प्रकारका प्रेमका लागि मान्य छन्, जसमा तपाईंले आफ्ना ग्राहकहरू र ब्लग पाठकहरूसँग साझेदारी गर्नुहुन्छ। जब तपाईं आफ्नो ब्लगिङ प्रयासहरूमा एकरूप हुनुहुन्छ, मानिसहरूले यसलाई चिन्छन्। केहि नयाँ पढ्नको लागि तपाइँको ब्लगमा कहिले अवतरण गर्ने भनेर उनीहरूलाई थाहा छ। यो दृष्टिकोणले निश्चित रूपमा तपाइँको ब्लग तर्फ उपभोक्ताहरू र वा सहस्राब्दीहरूको झुकाव बढाउँछ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले ब्लग पढ्नुभयो र तपाईंलाई यो मनपर्यो। तपाईले नयाँ ब्लग पोस्ट पढ्ने आशामा वेबसाइट पुन: भ्रमण गर्नुहुनेछ। तर, जब तपाइँ भर्खरको कुनै ब्लग पोष्टहरू फेला पार्नुहुन्न, तपाइँ नयाँ लेख पढ्न चाँडै फिर्ता आउने बारे सोचेर टाढा जानुहुन्छ।
तपाईं फर्कनुभयो तर अफसोस, अझै कुनै नयाँ ब्लग पोस्ट छैन। तपाईले निराश महसुस गर्नुहुनेछ, ब्लग निष्क्रिय छ र छिट्टै कुनै पनि समयमा साइट भ्रमण गर्नुहुनेछैन भन्ने निष्कर्षमा। तर वास्तवमा, ब्लग मालिकले मासिक एउटा मात्र नयाँ ब्लग लेख अपलोड वा प्रकाशित गर्दछ। तपाईलाई त्यो थाहा थिएन र अन्ततः ब्लग पढ्न छोड्नुभयो। अब, यदि तपाइँका पाठकहरूलाई तपाइँको ब्लगको फ्रिक्वेन्सी थाहा छ भने, तिनीहरू यसमा टाँसिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो दिईएको छ, तपाईंले एक निरन्तर प्रकाशन तालिका पछ्याउनु पर्छ। यो ब्लग प्रकाशन विधि अगाडि एक उत्तम तरिका हो।
सबै सहस्राब्दीहरूको साझा विशेषताहरू मध्ये एक सामाजिक मुद्दाहरूप्रति संवेदनशीलता हो। सहस्राब्दी भनेको एउटा पुस्ता हो जुन ग्रह, वातावरण, मानिसहरू र अन्य प्रजातिहरूलाई सताउने समस्याहरूको बारेमा गहिरो चिन्तित छ। स्वास्थ्य सेवा, भेदभाव, ग्रहको घट्दो स्वास्थ्य, प्रदूषण, र युद्धहरू धेरै सहस्राब्दीहरूलाई चिन्ता गर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हुन्। यो उमेर समूह यी समस्याहरूको बारेमा धेरै चिन्तित छ र यी चुनौतीहरूको बारेमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ।
यसैले, तिनीहरूले मानिसहरू, संस्थाहरू, र कम्पनीहरूलाई अत्यधिक समर्थन गर्छन् जसले तिनीहरूलाई समाधान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यसले सहस्राब्दीहरूका हृदयहरूलाई मोहित गर्ने र तिनीहरूलाई तपाईंको ब्लग पढ्नको लागि प्राप्त गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक सामाजिक मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। माथि उल्लेखित विषयहरू तपाइँको ब्लगिङ आलासँग सम्बन्धित नहुन सक्छ, तर तपाइँ तपाइँको उद्योग को लागी सान्दर्भिक प्रचलित विषयहरु को विकास को लागी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको उत्पादन र सेवाहरु संग सम्बन्धित ब्लग मा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ कि फरक पर्दैन।
तपाईंले सामाजिक सरोकारहरूमा अहिले र पछि केही पोस्टहरू समावेश गर्नुपर्छ। यसले तपाईंको ब्लग पाठकहरू बढाउन मद्दत गर्दछ। सम्झनुहोस्, सहस्राब्दीहरू अनलाइन उपभोक्ताहरूको समूह हो जसले जानकारीलाई छिटो प्रशोधन गर्छ र तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुभन्दा छिटो सिक्नुहोस्। त्यसोभए, यदि तपाईंको ब्लगले नयाँ प्रचलनहरू र उनीहरूसँग जडान हुने विषयहरूमा अनुकूलन गर्दैन। त्यसैले, निगरानी:
लोकप्रिय खोज सर्तहरु
प्रचलित शीर्षकहरू र ह्यासट्यागहरू
तपाईंको फिड र प्रतिस्पर्धीहरूको फिडहरूमा नियमित रूपमा साझा र मनपर्ने सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको अवलोकन गर्नुहोस्
यी गतिविधिहरूले तपाईंलाई सान्दर्भिक सामग्रीहरू सिर्जना गर्न र प्रकाशित गर्न मद्दत गर्नेछ जसले तपाईंको ब्लग पोष्टहरू पढ्नको लागि सहस्राब्दीहरू प्राप्त गर्नेछ।
मानिसको रूपमा, हाम्रो अन्तर्निहित इच्छाहरू मध्ये एक आफैलाई व्यक्त गर्न हो। तपाइँका पाठकहरूलाई उनीहरूको विचारमा आवाज दिन, तपाइँसँग र तपाइँको ब्लगका अन्य पाठकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिनु तिनीहरूलाई पुनरावर्ती पाठकहरूमा रूपान्तरण गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो। तपाईंले ब्लगमा पढ्नुभएको कुनै कुरामा प्रश्नहरू सोध्न, आफ्नो विचारहरू छलफल गर्न वा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न सक्षम हुनु महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन?
आखिर, तपाईंले सामग्री पढ्नको लागि बहुमूल्य समय समर्पित गर्नुभयो, र तपाईंले कम्तिमा यति धेरै स्वतन्त्रता पाउनुपर्दछ। यदि तपाईंले यो अवधारणा बुझ्नुभयो भने, तपाईंले धेरै पाठकहरूको पल्स समात्नु भएको छ। तिनीहरू पनि आफ्नो आवाज उठाउन, सुनिन, र तपाईंको ब्लगिङ समुदायको एक हिस्सा बन्न चाहन्छन्। तसर्थ, तपाइँ तपाइँको पाठकहरु को लागी एक प्रयोग गर्न को लागी एक सजिलो ब्लग टिप्पणी सेक्सन सेट अप गर्नुपर्छ। यो कुनै औपचारिकता संलग्न बिना सरल हुनुपर्छ।
Millennials आज उपभोक्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो समूह हो। तपाईंको ब्लग मार्केटिङ प्रयासहरूले तिनीहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर, तपाईको ब्लग पढ्न र यसलाई लामो अवधिमा अडिग हुनको लागि सहस्राब्दीहरू प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयासहरू आवश्यक पर्दछ। माथि उल्लेखित बिन्दुहरूले तपाईंलाई सहस्राब्दी ब्लग पाठकहरूलाई आकर्षित गर्न तपाईंको प्रयासहरू च्यानल गर्न निर्देशन दिन्छ। तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको ब्लगको पाठकहरू बढ्दै गएको हेर्नुहोस्।